Realme gosipụtara ezigbo onyonyo nke ekwentị izizi ya | Gam akporosis
Realme na-egosi ezigbo foto nke ekwentị egwuregwu mbụ ya
Emeputa Nyegharịa aha Ọ batala ahịa ekwentị dịka oke ifufe. Ndị enyemaka Oppo ji ebumnuche doro anya rute: ịghọ otu n'ime ụzọ ndị kachasị mma maka ihe ngwọta Xiaomi. Ngwá agha ha? Ndepụta nke ekwentị mkpanaaka nke na-enye ego maka ego siri ike ịkụ. Ma ugbu a, ha chọrọ ịga otu nzọụkwụ n'ihu.
Ruo ugbu a, Realme wakpoola ahịa atọ n'ụzọ doro anya: nbanye, ọkwa dị n'etiti na njedebe dị elu na usoro nke mobiles, dịka otuto X2 Pro. Ma ugbu a, o nwere ihe mgbaru ọsọ ọhụrụ: iji chee ama egwuregwu mbụ ya.
Kedu ihe ekwentị ọzọ Realme ga-adị?
Ọ bụ onye isi ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya onye, ​​site na akaụntụ ya Realme, kwuputara na ụlọ ọrụ ahụ nwere ndị ahịa nde atọ na ọkara. Onu ogugu nke na eme ka ezi oru nke oru ike. Na mgbakwunye, o kwuputala mmemme maka Mee 25 nke na-abịa nke ha ga-egosi azịza ọhụụ ha na-arụ ọrụ. Ọ laghị azụ azụ igosi ihe osise izizi nke onodu enigmatic.
Ọ ga-abụ ihe a tụrụ anya ya Realme X3 Pro? Anyị edoghị anya banyere ya, mana ihe anyị nwere ike ikwenye bụ na ọ ga-abụ ekwentị na-egwu egwu. Karịa ihe ọ bụla n'ihi na, CEO nke Realme n'onwe ya na-ebipụta ọtụtụ ozi enigmatic na profaịlụ Weibo ya. Na, n'ime otu n'ime ha, ọ na-ekwu maka njirimara nke ekwentị egwuregwu dị mma ga-enwerịrị: ngwaike dị ike iji kpalie egwuregwu ọ bụla ma ọ bụ ngwa ọ bụla na-enweghị nsogbu ọ bụla n'ihi ọtụtụ ibu ọrụ ha chọrọ, na mgbakwunye na mgbasa ọkụ sistemụ nke na - enye gị ohere ịnụ ụtọ aha anyị kachasị amasị anyị ọtụtụ awa na - enweghị nsogbu na - enweghị nsogbu na - ekpo oke ọkụ.
Maka ugbu a, anyị enweghị ozi gbasara atụmatụ ndị ekwe omume ekwentị izizi nke Realme ga-arịgo, mana o doro anya na ọ ga-abụ ezigbo ọmarịcha na ọkwa teknụzụ, na mgbakwunye na ịnwe atụmatụ mara mma nke ukwuu, dị ka ihe onyonyo ahụ si dị ndị soro isiokwu a. Naanị anyị ga-eche ruo na Mee 25 iji hụ ihe ụlọ ọrụ ahụ juru anyị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Realme na-egosi ezigbo foto nke ekwentị egwuregwu mbụ ya
Marc Levoy, onye nwere ọgụgụ isi n'azụ njirimara igwefoto Google kachasị mma, hapụrụ ụlọ ọrụ ahụ